Vanim-potoana maitso ahitra: Ho henjana ny tsy fanjarian-tsakafo amin’ity
mercredi, 29 juillet 2020 19:43
Araka ny vinavina dia ho henjana ny tsy fanjarian-tsakafo mandritra ny vanim-potoana maitso ahitra ho avy, izay hanomboka amin’ny volana novambra.
Amin’ny faran'ny volana Jolay anefa dia tombanana ho ny ampahefatry ny mponina ao atsimon'i Madagasikara, izany hoe, olona maherin’ny 550 000 no tsy hanan-kohanina isan'andro. Ny Distrikan'i Ampanihy sy Tsihombe no ho tena voakasik'izany.
Zaza maherin’ny 100 000 any amin'ny Distrika enina, tena voa mafy any atsimon'i Madagasikara, no ahiana ianjadian’ny tsy fahampian-tsakafo mandritra ny taona 2020, ka ny19 000 amin’izany dia tranga tena mafy.
Ianjadian’ny hain-tany matetika ny faritra atsimon’i Madagasikara hatramin’ny taona 2014. Nisy fihatsarany kely izany tamin'ny taona 2019, saingy noho ny tsy fahampian’ny orana tamin'ny fiandohan'ny taona 2020 dia tsy nanjary ny voly, indrindra ny haninkotrana sy ny voamaina, kely ny vokatra, ary maro ny fianakaviana no voatery nihinana ny haninkotrana izay mbola tsy matoy akory.
Ny korontana ara-toekarena ateraky ny valan’aretina coronavirus koa dia ahiana hanamafy ny tsy fanjarian-tsakafo, satria mety hitombo ny fahasahiranan’ny olona avy any atsimo miasa an-tanan-dehibe mandefa vola ho an’ny ankohonany any an-tanàna.